Howl galkii Ciise Masiix waxaa ka mid ah soo kicintii Laaseroos - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Surada Dukhan (Surada 44 – Qiiqa ama qaca) Waxaay noo sheegeysaa qabiilkii qureeshta ahaa ee diiday fariintii nebi Maxamed iyagoo caqabad oga dhigaayo waxyaabahan soo socdo.
kuwaasi (Gaaladu) waxay dhihi.arrintu ma aha geerida hore mooyee, mana nihin kuwo la soobixin.noo keena aabayowgano haddaad run sheegaysaan.
Waxaay ku xujeeyeen inuu inuu ka soo sara kiciyo qof dhintay si ay fariintiisa runimadeeda u caawiso. SuuradaAhqaf (Suurada 46 – Dabeesha waxay isku rogeysaa buurta ciidda leh) Waxaay mar kale sheegeysaa caqabad la mid ah oo ka soo wejahday kuwii gaalada ahaa ee waalidkiisa an rumaysan.
Waxaa jira mid ku dhihi labadiisii waalid Ufbaa la idin yidhi ce ma waxaad ii yaboohaysaan in la i sou bixin iyadoo dadkii horaba lagay, Labada waalidna ay Eebe uga baryi (hanuun), iyagoo ku dhihi magacaa ba’; ee rumee, ballanqaadka Eebana waa xaqe, oo markaas ku dhihi waxaasi waa beentii dadkii hore.
Suurada Ahqaf 46:17
Gaaladii sarakicidda waxaay u arkeen sida quraafaaf maadaama aynan weligeed dhicin.Suuradda Duqaan iyo suuradda Ahqaf labaduba waxaay tixraacayaan sida ay gaaladii ogu tijaabanayaan ka soo sara kicinta dhimashada ayaa ahayd midaay nabiga ku baarayaan iyo qasiidada aasaasiga ah ee dhamaan caasiyiinta.Ciise Masiixina wuxuu la kulmay baaritaan kuwa ka soo horjeedoay.Labadan tijaabo wuxuu u adeegsaday inuu labaduba ku muujiyo calaamadaha awoodiisa iyo ujeedada howshiisa.
Maxaay ahayd Howlgalka Masiix?
Ciise Masiix ayaa wax baray,oo bogsiiyay oo soo bandhigay mucjisooyin badan.Laakiin suaashii waxaay weli maskaxdooda ku dambeeysay xertiisa,kuwii raacsanaa iyo cadaawahiisii iyagoo leh: muxuu u yimid? Qaar badan oo ka mid ah nebiyadii hore, oo uu ka mid yahay Nebi Muuse ,sidaasoo kale waxay soo bandhigeen mucjisooyin xoog badan. Maadaama horeyba , oo Ciise laftiisa ayaa wuxuu yidhi “uma imaanin inaan baabi’iyo sharciga”, maxay ahayd waxa loo diray?
Ciise Saaxiibkii ayaa aad u bukooday. Xertiisii ​​waxay filayeen in Ciise saaxiibkii uu saaxxiibkii uu bogsiin doono,siduu u bogsiiyay kuwoo badan oo kale.laakiin Ciise si ula kac ah uma bogsiin saaxiibkii siduu u bogsiiyay kuwoo kale oo badan , KQ waxaa ku qoran:
Ciise Masiixi wuxuu wajahay dhimasho
axaa jiray nin buka oo ah Laasaros reer Beytaniya ee joogay tuulada Maryan iyo walaasheed Maarta.
37 Qaarkoodse waxay yidhaahdeen, Ninkan oo indhaha u furay kii indha la’aa, miyuusan wax ka samayn karin inuusan ninkaasu dhiman?
Yooxanaa 11: 1-44
Walaalahii waxaay rajeeynayeenn in uu Ciise Masiix dhaqso ugu imaan doono si uu walaalkood u bogsiiyo. Ciise Masiix safarkiisii dib ayuu u dhigay isagoo ujeedadiisa ahayd inuu ogolaado inuu Laasaroos dhinto,cid fahmi kartay ma jirin sababta.Laakiin tusaalahan waxaan ku arki karnaa qalbigiisa oo waxaan aragnay inuu xanaaqay.Laakiin yuu u xanaaqay? Ma Walaalaha? Ma Dadkii badnaa? Ma Xerta? Ma Laasaros? Maya, wuu u xanaaqay dhimashada lafteeda. Sidaasoo kale tani waa mid ka mid ah labadii jeer ee uu Ciise Masiix Ilmooday ee la og yahay.Muxuu u ooyay?Sababtuu u ooyay waxay ahayd isagoo arkay saaxiibkiis oo dhintay.dhimashada xanaaq ka badan am aka daran ayay Ciise ku keentay.
Bogsiinta dadka xanuunsan, waa sida ugu wanaagsan, oo taasina waxay dib u dhigtaa dhimashadooda. Ha bogsiiyo ama yuu bogsiinin geerida ama dhimashada dadka oo dhan waay dhintaan,Ha fiicnaado ama ha xumaado,rag ama dumar duq iyo dhalinyaro ,culumo iyo midaan ahaynba.Dhimashadana waxay run noqotay tan iyo ilaa Aadam, kii u dhintay caasinimadiisa darteed. Farcankiisii ​​oo dhan, aniga iyo adiguba waan ku jirnaa, waxaana gacanta ku qabtay cadaawe – geeri. Wax Geerida ka soo hor jeeda waxan dareemeynaa inaanay jirin jawaab,rajo laaan.Marka uu jiro xanuun waxan yeelanaa rajo waana sababta walaalahii Laasroos ay u rajeynaayeen inuu bogsoonayo.laakiin markay dhimashada arkeen waxay dareemeen rajo laaan.Sidaasoo kalena inagana waxay noo tahay run.Isbitaalka wuxuu leeyahay rajo laakiin xabaashu rajo ma laha.Dhimashada waa cadaawaheena ogu dambeeya.Tanina waa miduu ciise masiix u yimid inuu naga difaaco waana miduu siduu u cadeeyay walaalahii ama ogu sheegay isagoo leh:
Anigu waxaan ahay sarakicidda iyo nolosha.
Ciise Masiix wuxuu u yimid inuu dhimashada babiiyo oo uu nolosha siiyo kuwa doonaya oo dhan. Wuxuu awoodiisa ku tusay hawshiisa isagoo Laasaroos si cad oga soo sara kiciyey dhimashada. Wuxuu dhammaan dadka oo dhan u bixiyay si isku mid ah mid kasta oo doonaayo halkuu ka dhiman lahaa inuu noolaado.
Iyadoo dhimashadu ay dhimashada tahay cadowga ugu dambeeya ee dadka oo dhan, inteena badan waxay qabsadaan oo haysta ‘cadowayaal’ yar, oo ka dhasha isku dhacyada siyaasadeed, diimeed, qowmiyadeed iwm ee ay sii wadaan kuwaa nagu xeeran waqtiga oo dhan. Sidaasoo kale Tanina waxay run ahayd wakhtigii Ciise Masiix. Jawaabahii ay markhaatiyaasha ka marag fureen mucjisadan waxaan arki karnaa walwalka weyn ee dadyowgii kala duwan ee waagaas noolaa. Waana sidan jawaabahii kala duwnaa sida ku qoran injiilka,waa
Yooxanaa 11: 45-57
Sidaa daraadeed xiisaddii ayaa kacday. Ciise Masiix wuxuu caddeeyey inuu yahay ‘nolosha’ iyo ‘sarakicida’ wuxuuna ka adkaday geeri nafteed. Hoggaamiyaashu waxay u dhigeen shirqool ay doonayen inay ku dilaan. Qaar badan oo dadkii ah ayaa rumaystay, laakiin kuwa badan waxay garan waayeen waxay rumaystaan. Way fiicnaan lahayd inan isweydiina haddii aan markhaati ka nahay Sara kicintii Laasaros oo ah waxaan samayn lahayn inaan doorano. Ma waxaan la mid nahay Farrisiinta , oo xoogga saaraya khilaafyada qaar oo si dhaqsa ah lagu lagu hilmaamayo Taariikh,iyo oo la waayo ka soo sara kicintii dhimasha? Mise ma waxan rumeyneynaa isaga oo aan rajadeena saaranaa sara kicinta uu bixiyo, xitaa haddaannan dhammaan wada fahamsanayn? Jawaabihii kala duwanaa waxaa dib loogu soo qoray waana isla jawaabihii laga bixiyay dalabkiisii ee ​​aan maanta ka bixinay.
Khilaafaadkan ayaa sii kordhayay markii ay Iidda Kormaridda soo dhowaatay – isla dabaal dagii uu Nebi Muuse bilaabay 1500 sano ka hor taasoo ahayd calaamad kormarida dhimashada. Injil wuxuu sii waday oo muujiyay siduu Ciise Masiix u go’aansaday inuu howshiisa ku fuliyo iyadoo laga adkaanayo geerida iyadoo la caawiyo qof ka fogaaday dadka kale sida isagoo ‘khaa’in’ ah.
Tags:isa al maish wuxuu kiciyaa lazarusLazarus ayaa la sara kiciyeywaa iyo Lazarus